यी हुन् आजको मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयहरु
By नवीन सन्देश on	 १३ आश्विन २०७३, बिहीबार १३:३६ · समाचार
काठमाडौँ । सरकारले अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ । उनी वावुराम भट्टराईले ल्याएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्ष थिए ।
त्यस्तै सरकारले बजेटका आश्रित तीन विधेयकलाई पारित गर्दै संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ । आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत एक्काइसौँ संशोधन विधेयक २०७३ विधेयक पारित भएका छैनन् । बैठकले मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक फिर्ता लिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिएको हो ।टिचिङ अस्पतालका डा. गोविन्द केसीले यो माग उठाउदै आएका थिए । त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (नाम्स) को नाम परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सम्मानित नेता पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नाममा राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।